कतारले नेपाली कामदारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले देशनिकाला गरेको एमनेस्टीको ठहर ! «
कतारले नेपाली कामदारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले देशनिकाला गरेको एमनेस्टीको ठहर !
Published : 15 April, 2020 9:59 pm
एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कतार सरकारले दर्जनौं आप्रवासी कामदारलाई स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण तरिकाले देशनिकाला (डिपोर्ट) गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । कामदारलाई परीक्षणका लागि जम्मा गरेर विभिन्न आरोप लगाएर देश निकाला गरिएको एमनेस्टीको अध्ययनले देखाएको छ । कतारले चैत २ र ६ गते ४ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई डिपोर्ट गरेको थियो । पहिलो लटमा २५० र दोस्रोमा १५० भन्दा बढी कामदार कतारी सरकारको धरपकडपछि देशनिकालामा परेका थिए ।